Thwebula CodelobsterIDE 1.9 – Vessoft
Isigaba: Amathuluzi wewebhu
Ikhasi elisemthethweni: CodelobsterIDE
Usekela izinhlaka eziningi ze-PHP
I-PHP-debugger eyakhelwe ngaphakathi
Amazwana ku CodelobsterIDE
CodelobsterIDE software ehlobene
Isethi software for quality web ukuthuthukiswa kanye ukufakwa web server ephelele. Isofthiwe kuhlanganisa Apache web server, MySQL database futhi PHP script notolika.
Ithuluzi Elula ukudala futhi thwebula amakhasi ewebhu ngaphandle kokwazi HTML. Isofthiwe umhleli kanye isethi izifanekiso ngomsebenzi lula nge izinto.
I-Genymotion – i-emulator ye-android yokuqalisa izinhlelo zokusebenza zeselula kukhompyutha yakho. Isoftware isekela izinhlobo ezahlukahlukene zamadivayisi we-Android nezinguqulo zawo.
Umhleli umbhalo okuyinto is kabanzi phakathi program. Isofthiwe ligxile ukuhlela kanye ukufomatha umbhalo okulotshwe C ++ ulimi lokwakha.
Isihleli sevidiyo seMovavi – umhleli wevidiyo omuhle kakhulu onokuhlunga okuningi nemiphumela ukuqedela ukucutshungulwa kwamafayela wevidiyo futhi uwagcine ngefomethi yemidiya efanele